Utu Pi 4: ụlọ ọrụ Spanish na-arụ ọrụ iji weta Vulkan | Site na Linux
Utu Pi 4: ụlọ ọrụ Spanish na-arụ ọrụ iji weta Vulkan
Isaac | | Apụta, Egwuregwu
Ndị nwere SBC Raspberry Pi 4 nọ na ihu ọma, dịka otu ụlọ ọrụ Spen a na-akpọ Igalia na-arụsi ọrụ ike iweta ihe ngosi eserese nke Vulkan nakwa na ngwaọrụ a. API dị ike nwere ike dochie OpenGL n'oge na-adịghị anya, na-enye ndị ọhụụ obere ohere ọhụụ. Cheta na maka ugbu a, Raspberry Pi 4 na-akwado OpenGL ES API (nke ndị Khronos Group jikwaa).
Ma na Vulkan ị nwere ike ịrụ ọrụ na ike karịa na usoro ọgbara ọhụụ maka ikpo okwu mgbakọ Britain a. Na ekele niile maka mmepe nke a Companylọ ọrụ Spanish, nke na-eke ndị ọkwọ ụgbọala dị mkpa maka sistemụ arụmọrụ Raspi iji rụọ ọrụ na ihe eserese nke egwuregwu vidiyo na ngwa site na API a.
N'oge a, onye ọ bụla nwere Raspberry Pi 4 na Broadcom BCM2711 SoC kwesịrị inwe afọ ojuju ịrụ ọrụ na OpenGL ES 3.1 API eserese nke m hotara n’elu. Igalia emeela nkwado ahụ ka ọnwa ole na ole gachara iji wulie site na 3.0 ruo 3.1 (na mgbakwunye na ịdozi ụfọdụ chinchi ma gbakwunye ụfọdụ ndozi dị ka ojiji nke shades computational).
Ugbu a, ha atụpụtala ka ha ga n'ihu na-aga Vulkan. Ozugbo ha mechara OpenGL ES, ha na-elekwasị anya n'ọrụ ha niile na API ọzọ. Ihe ga-esi na ya pụta ga-enwe ike ịgba ọsọ ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-achọ ihe osise software karịa nke ị nwere ike ịgba ọsọ na bọọdụ a ugbu a, yana mmetụta dị elu na arụmọrụ karịa.
N'oge ahụ, mgbe izu ole na ole na-arụ ọrụ na Vulkan, ha enweela ike ime ụfọdụ ngosi, dị ka ịgba ọsọ ihe atụ mbụ nke triangle na RGB (ụdị «Ndewo Ụwa»N'ime ụwa eserese).
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata nkọwa ndị ọzọ nke Igalia na mmepe ya, ị nwere ike ịga leta ya ukara websitel
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Apụta » Utu Pi 4: ụlọ ọrụ Spanish na-arụ ọrụ iji weta Vulkan
MATE: Kedu ihe ọ bụ na kedu etu esi etinye ya na DEBIAN 10 na MX-Linux 19?
Cinnamon: Kedu ihe ọ bụ na otu esi etinye ya na DEBIAN 10 na MX-Linux 19?